Shiinaha 5.0-tan oo ah Gawaarida Gawaarida Gawaarida Dheeriga ah & Soo-saare | Wilk
WIK 5.0-tan Gawaarida Xamuulka
Qaabeynta istaandarka ah: Mashiinka naaftada Chaoyang 6102
Gudbinta dareeraha dhexe iyo koonfurta
Laba albaab oo saddex mitir ah
Taayiro cusub oo togan
Qalabka shaqada / xirmada adeegga
Hordhaca waxqabadka: isu imaatinka qorrax soo baxa,, tamarta, ilaalinta deegaanka
Gudbinta South Central,, siman,, hawlgalka
Isbedelka Linde, dhululubada Haydarooliga, daboolka dahaarka aamusnaanta SMC
Hongchang bir tayo sare leh alwaaxa birta ah, maahan, qalloocan
Dareemis cusub oo wanaagsan, xirasho xoog leh, nuugista naxdinta wanaagsan,
Qaabeynta ikhtiyaariga ah: Mashiinka Chaoyang, mashiinka qoryaha daasadda ah
Soo rar matoorrada Islington
Gudbinta dareeraha gacanta, gudbinta dareeraha elektromagnetic
Laba qaybood 3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m albaab albaab ah
Laba qaybood 3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m jir albaab furan oo buuxa
Saddex qaybood oo kala ah 4.5 m, 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 m albaab buuxa oo bilaash ah
Taayir gaas cusub oo wanaagsan / taayir adag, taayir gaaska qorrax soo baxa / taayir adag, ilaalinta taayirka adag ee deegaanka
Marka loo eego badeecadaha kala duwan, isu-geynta alaabooyin kala duwan, sida wareejinta dhinaca, guntinta bacaha cudbiga ah
Waraaqo duub ah, waraaqo kartoon ah, iwm
WIK Xuduudaha farsamada ugu muhiimsan
Model. WIK50 Model. WIK50
Nooca awooda Naaftada. Dherer buuxa no fargeeto mm 3430。
Kug lagu qiimeeyay 5000。 Wareeg buuxa mm 2235。
Xamuulka xarunta mm 600。 Dhererka wiishka ugu badan ee fargeetada (oo leh shelf xannibaya) 4380。
Qaadidda dhererka mm 3000。 Albaabka albaabka dhererkiisuna yahay mm 2500。
Dherer wiish bilaash ah 205。 Gawaarida hore. 8.25-15-14PR
Xajmiga fargeetada mm 1220 × 150x60 Giraangiraha gadaal 8.25-15-14PR
Albaabka albaabku hore ayuu u janjeeraa 6/12。 Gawaarida gawaarida mm 2250。
Radius ugu yaraanta ugu yar mm 3250。 Gawaarida gawaarida gawaarida hore / gadaal gadaal mm 1470/1700。
Xadka ugu hooseeya ee xagasha midig mm 5500。 Is-miisaan aan culeys lahayn Kg 7980。
Ballaadhinta kanaal ugu yar xagal 2960。 Batariga danab / V / Ah (12/80) × 2
Dhul nadiifinta ugu yar mm 200。 Qaabka mishiinka CY6102BG6
Dhererka jir dhererkiisa mm 2469。 Awood lagu qiimeeyay kw / rpm 81/2500。
Hor-dhaafid mm 610。 Xuddunta lagu qiimeeyay Nm / rpm 353/1700。
Xawaaraha ugu badan ee safarku waa buuxa km / h 26。 Boodh X safarka mm 102x118
Xawaaraha wiishka ugu badan ayaa ka buuxa mm / m420 400。 Tirada dhululubada 6。
Jiidida ugu badan ayaa ka buuxan KN 51.4。 Barakaca L 5.785。
Awoodda fuulitaanka ugu badan% 20。 Awoodda haanta shidaalka L 120。
Dherer buuxa oo fargeeto mm 4650。 Cadaadiska shaqada Mpa 20。
Hawlgallada Forklift waxay yareyn karaan fikradaha shaqada iyo xoogga shaqaalaha, waxay hagaajinayaan waxtarka shaqada, waxayna si buuxda uga faa'iideysan karaan boosaska kuraasta, gawaarida, iyo bakhaarada. Waxa kale oo ay soo gaabinaysaa waqtiga hawlgalka ee rarka, dejinta, maaraynta, iyo xirxirida, waxay dadajineysaa rogista gawaarida iyo maraakiibta, waxayna hagaajineysaa Heerka badbaadada shaqada.
Forklifts gubashada gudaha waxay guud ahaan isticmaalaan naaftada, baatroolka ama matoorada gaaska baatroolka si ay awood u siiyaan. Way culus yihiin oo way madax bannaan yihiin. Waxaa badanaa loo isticmaalaa goobaha shaqada oo leh buuro waaweyn, wadooyin aan sinnayn, walxo culus, iyo xaalado cimilo oo daran.
Aan u soo bandhigo nidaamka hiitarka ee forklift gubashada gudaha.
Nidaamka hiitarka waxaa ka mid ah hiitarka iyo muraayadda hore, iwm. Radiator waxaa sidoo kale loo yaqaan haan biyo ah, oo ka kooban seddex qaybood: qolka gelitaanka biyaha, qolka ka baxa biyaha iyo xudunta kuleylka. Dareeraha qaboojiyaha (biyaha) wuxuu ku qulqulaa xudunta hiitarka, hawaduna waxay dhaaftaa banaanka xudunta hiitarka, sidaa darteed kuleylka ay qaboojinayaan biyaha qaboojiyaha mashiinka gubashada gudaha waxaa loogu wareejin karaa hawada banaanka, si heerkulka biyaha qaboojinta ay u hoos u dhig si aad mar labaad u wareegto. Shaqada muraayadda hore waa inay ka dhigto hawada ay nuugayso marawaxaduhu inuu dhex maro hiitarka si loo hagaajiyo waxtarka marawaxadda.
Qalabka forklifts ee guban gudaha waxay guud ahaan u isticmaalaan naaftada, baatroolka, gaaska dareeraha ah ee dareeraha ah ama matoorada gaaska dabiiciga sida awood ahaan, oo leh xamuul culeyskiisu yahay 1.2 ilaa 8.0 tan, iyo balaca marinka shaqada ee 3.5 ilaa 5.0 mitir. Iyadoo la tixgelinayo qiiqa qiiqa iyo buuqa, waxaa badanaa loo isticmaalaa bannaanka, aqoon isweydaarsiyo ama Meelo kale oo aan lahayn shuruudo gaar ah oo lagu sii daayo qiiqa iyo buuqa. Ku habboonaanta buuxinta shidaalka awgood, waxay xaqiijin kartaa hawlgal joogto ah oo muddo dheer soconaya waxayna ka shaqeyn kartaa jawi qalafsan (sida maalmaha roobka).
Haddii bamka biyaha uusan si sax ah u shaqeyneynin ama masaafada dhexe ee udhaxeysa mootada wadida iyo giraangiraha lagu riixo ee marawaxadaha saxan aysan sax aheyn, suunka ayaa noqon doona mid dabacsan oo sibiibix ah, si xawaaraha gaariga uu wato u hoos u dhaco, xawaaraha bamka biyaha ayaa hoos u dhacaya, iyo heerka socodka matoorka biyaha ayaa hoos u dhacaya; Wadadu way xidhan tahay socodka biyuhuna ma siman yahay; ama cilladaha heer-kul-kulmeedka iyo wareegga biyaha ee nidaamka oo dhan waa la joojiyaa; arrimaha kor ku xusan waxay sababi doonaan heerkulka biyaha gudaha ee mashiinka gubashada gudaha inuu aad kor ugu kaco, taasoo keeneysa in nidaamka qaboojinta uu kululaado. Intaa waxaa dheer, mashiinka gubashada gudaha wuxuu kululeyn doonaa nidaamka qaboojinta sababo la xiriira cilladaha kale sida waqtiga dabka oo khaldan.
1. Gawaarida Forklift waa kuwo yar yar, laakiin leh xasillooni wanaagsan waxayna ku habboon yihiin jiidista. Waxaa loo isticmaalaa waqti aan xadidnayn. Guud ahaan waxaa loo isticmaalaa banaanka. Marka la barbardhigo matoorrada shidaalka, matoorada naaftada ah waxay leeyihiin firfircooni fiican (oo si sahlan loo kululeeyo xawaare hoose, awood wareeg ah, iyo karti hawlgal muddo dheer ah), iyo kharashka shidaalka oo hooseeya. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin gariir ballaaran, buuq weyn, barakac ballaaran, is-aasaasi ah, iyo qiimo sare. Xamuulka wuxuu noqon karaa 0,5 tan ilaa 45 tan.
2. Gawaarida Forklift waa kuwo yar yar, laakiin leh xasillooni wanaagsan waxayna ku habboon yihiin jiidista. Waxaa loo isticmaalaa waqti aan xadidnayn guud ahaanna waxaa loo adeegsadaa banaanka. Mashiinnada baatroolku waxay leeyihiin muuqaal yar, hagaajinta iftiinka, awoodda waxsoosaarka sare, sawaxanka iyo gariirka shaqada oo hooseeya, iyo qiimaha hooseeya. Si kastaba ha noqotee, matoorada baatroolku waxay leeyihiin awood wareeg-gaaban, awood-hawleed muddo-dheer ah, iyo kharashyo shidaal oo aad u hooseeya. Xamuulka wuxuu noqon karaa 0.5 tan ilaa 4.5 tan.
3. Miisaanka culus ee dareeraha gaaska batroolka forklift (magaca buuxa LPG) waa isku dheelitir shidaal culus oo shidaal leh oo lagu qalabeeyay aaladda beddelka gaaska dareeraha ah, taas oo loo yareeyay Lk forklift, taas oo loo isticmaali karo in lagu kala beddelo baatroolka iyo dareeraha. gaaska ku shubida. Faa'iidada labaad ee forklifts LPG ayaa ah in gaaska qiiqa uu fiicanyahay, iyo qashinka qashinka ah ee kaarboon biyoodka leh (CO) ayaa si weyn uga badan tan matoorada shidaalka. Qiimaha shidaalku wuu hooseeyaa (15KG ee gaaska dareeraha ah wuxuu la eg yahay 20 litir oo shidaal ah), waxayna ku egtahay howlaha gudaha oo diidan deegaanka oo hooseeya.
Hore: 7.0-tan Gawaarida Xamuulka ah
Xiga: 5.0 tan oo naaftada ka baxsan wadada Forklift